Muxuu Kheyre uga baaqday kulankii beesha caalamaka ee la-dagaalanka musuqa? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Kheyre uga baaqday kulankii beesha caalamaka ee la-dagaalanka musuqa?
Muxuu Kheyre uga baaqday kulankii beesha caalamaka ee la-dagaalanka musuqa?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka baaqday kulan muhiim ah oo ku saabsanaa la dagaalanka musuq-maasuqa oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Maanta waxay ku aaddanayd 9 ka December oo ah maalinta caalamiga ah ee la dagaallanka musuqmaasuqa, waxaana Xarunta Xalane lagu qabtay shir weyn oo loogu tala galay in madaxda dowladda federaalka ah iyo safiirada beesha caalamka ay ka soo wada qaybgalaan.
Xubnaha shirka lagu casuumay ayaa waxaa ka mid ahaa ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo la filayey inuu hoggaaminayo wafdiga dowladda Soomaaliya ee kulanka maanta, halka beesha caalamkana ay ka imanayeen safiirada Maraykanka, Britain iyo Midowga Yurub, Midowga Afrkia iyo Qaranada midoobay.
Si kastaba, Khayre ayaa ka baaqday kulankaas xilli guddiga maaliyadda baarlamanka Soomaaliya ay xukuumadda ku eedeeyeen inay sameysay musuq maasuq lagu lunsaday lacag dhan 42 milyan oo dollar.
Si kastaba xubno ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha oo Caasimada Online la hadlay ayaa sheegay in baaqashada kulanka aysan wax xiriir ah la lahayn warbixinta guddiga maaliyadda.
Waxay ay sheegeen in Kheyre u baaqday inuu ka qeyb galo kulanka uu maanta madaxweynaha Soomaaliya ku saxiixayo sharciga la-dagaalanka musuq maasuqa.
Hoos ka arag caddeymo ku saabsan in Kheyre uu ka baaqday kulanka.